PUTIN OO MADAXWEYNAHA RUUSHKA U TARTAMI DOONA MARKII AFRAAD | Saxil News Network
Moscow(saxilnews.com)-Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, ayaa si rasmi ah loogu magacaabay inuu
u tartamo in dib loo soo doorto bisha March , taas oo noqon doontaba markiisii afraad ee uu xilkan u tartamo.
Muusan ka soo muuqan xaflad ka dhacday magaalada Moscow taas oo lagu xaqiijinayay musharaxnimadiisa.
Magacaabista ayaa waxaa haatan meelmarin doona guddiga doorashooyinka ee Ruushka, guddigaas oo Isniintii ka mamnuucay inuu tartamo ninka kaliya ee magaca leh ee mucaaradka ka tirsan ee la tartami lahaa Putin waa Alexei Navalny.
Afhayeenka aqalka Kremil-ka ee looga arrimiyo dalka Ruushka, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in sharciyaqaanada looga baahan yahay inay qiimeeyaan hanjabaadda siyaasiga mucaaradka ah Alexei Navalny ee ku goodiyay in uu qaadacayo doorashada madaxtinimada, taas oo uu tilmaamay inay tahay sharci-darraba.
Mr Navalny ayaa xukunka lagu riday ku tilmaamay mid siyaasadaysan, aragtidaas oo ay baritaartay afhayeenka Midowga Yurub, Maja Kocijancic, taas oo sheegtay in xayiraadda lagu soo rogay siyaasigan ay shaki wayn galinyaso in Ruushka ay ka jirto siyaasadda axsaabta badan.